रकम फिर्ता नगरेको झोंकमा बुहारीको हत्या ! | NayaMedia
गृहपृष्ठ / अपराध
रकम फिर्ता नगरेको झोंकमा बुहारीको हत्या !
बिहि, पुस १०, २०७६ (December 26, 2019, 10:08 am) मा प्रकाशित
जनकपुरधाम । रकम फिर्ता नगरेको निहुँमा जेठाजुले खुकुरीले हान्दा धनुषामा महिलाको मृत्यु भएको छ । आफ्नै जेठाजु श्रीप्रसाद पञ्जियारको खुकुरी प्रहारबाट ३८ बर्षीया रानीको मृत्यु भएको हो ।
घटनापछि फरार भएका श्रीप्रसादलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ स्थित रेल्बे ट्रयाकबाट बुधबार राति ९ बजे पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।
श्रीप्रसादले प्रहरीसँगको बयानमा हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । आफूलाई पुनः विदेश जान रकम जसरी पनि चाहिने भन्दै श्रीप्रसादले दबाव दिएका थिए । रानी ऋण खोज्दै बहिनीको घर बडहरी गएकी थिइन् ।
रानीले बडहरीमै आउनु रकम दिन्छु भनी जेठाजु श्रीप्रसादलाई बोलाएकी पनि थिइन् । तर उनलले ऋण नपाएपछि श्रीप्रसादले खुकुरी अनुसन्धानबाट देखिएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी रमेशकुमार बस्नेतले बताए । ‘रकम नदिँदा ज्यानै लिने हिसाबले श्रीप्रसाद खुकुरी बोकेरै बडहरी पुगेको खुलेको छ ।’
रकम नदिएपछि मार्ने उनको पूर्वयोजना नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनापछि फरार भएका श्रीप्रसादलाई पक्राउ गरी बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
रानीले रकम फिर्ता नगर्दा श्रीप्रसादको घरमा श्रीमतीसँग झगडा पनि भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘आफ्ना भाइबुहारीलाई दिएको रकम फिर्ता नगरेको झोंकमा श्रीप्रसादकी श्रीमती चार दिनअघि माइत गएपछि श्रीप्रसादलाई रिस उठेको देखिन्छ’ प्रहरी प्रमुख बस्नेतले भने ।
मिथिला नगरपालिका ९ बडहरीस्थित आँपको बगैचामा टाउको, नाक र बायाँ हातको तीन ओटा औंला काटिएको अवस्थामा रानी भेटिएकी थिइन् । तत्कालै अस्थायी प्रहरी पोष्ट बडहरीको टोली र स्थानीयहरुले उनलाई उद्वार गरी उपचारका निम्ति पठाए पनि रानीको मृत्यु हुन्छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ कुर्था निवासी श्रीप्रसाद रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहँदा भाइ मिश्रीप्रसाद र बुहारी रानीदेवीलाई पटक पटक रकम पठाएका थिए ।
आफूले पठाएको रकम ३ लाख रुपैयाँ पुगेपछि श्रीप्रसादले फिर्ताका लागि दबाब दिन्छन् । आफ्ना श्रीमान् मलेसिया गएको र रकम पठाएपछि दिने भन्दै रानीले टार्दै आएकी थिइन् ।
बिहि, पुस १०, २०७६ (December 26, 2019, 10:08 am) मा Naya Media द्वारा अपराध अन्तर्गत प्रकाशित
प्रहरी कन्ट्रोलको १०० नम्बरमा फोन- ‘आज ठूलो अपराध गर्दैछु, अनि आफु पनि मर्छु’
५० राउण्ड गोलीसहित विमानस्थलबाट आमाछोरा पक्राउ
किसानलाई ठगी गरेको अभियोगमा लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाल पक्राउ